2019 ဆောင်းရာသီမှာ ခေတ်စားလာမယ့် နှုတ်ခမ်းနီအရောင်များ – YANGON STYLE
2019 ဆောင်းရာသီမှာ ခေတ်စားလာမယ့် နှုတ်ခမ်းနီအရောင်များ
နှုတ်ခမ်းနီဆိုတာ အမျိုသမီးတွေအတွက် ယုံကြည့်မှု Level တိုးမြှင့်ပေးတဲ့ Cosmetic ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ခေတ်အဆက်ဆက်မှာ အရောင် ပုံစံဒီဇိုင်းများစွာ နဲ့ Fashion ရေစီးကြောင်းမှာအရေးပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
နှုတ်ခမ်းနီကို ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ကအမျိုးသမီးတိုင်းစွဲလမ်းနှစ်သက်ပါတယ်။ သို့သော် အရောင်ဆန်း အရောင်တောက်များကို ခြယ်သဖို့အတွက်တော့မဝံမရဲဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုယုံကြည်မှုမရှိတာတွေကို စွန့်လွှတ်ပြီး ဆန်းသစ်သော တမူထူးခြားတဲ့ Another Me ပုံစံနဲ့ 2019 ဆောင်းရာသီမှာ ကွန်ဖီးဒန့်Level အမြင့်ဆုံးရောက်နေဖို့ 2019 world wide trend lipstick Color တွေကိုမှ မြန်မာအသားအရောင်ပုံစံနဲ့ လိုက်ဖက်မယ့် အရောင်ပုံစံတွေကို ရွေးခြယ်ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
1.Oxblood Red Lipstick
2.Pumpkin Red Lipstick.
6.No Lipstick, Lipstick.
2019ဆောင်းရာသီအတွက် အင်မတန်ပြည့်စုံတဲ့ အရောင်ကတော့ ကြက်သွေးရောင်ပါရှင်။ တည်ငြိမ်ရင့်ကျတ်ခြင်း နှင့်အတူတက်ကြွရဲရင့်ခြင်းတွေကိုပါ ရရှိစေနိုင်မှာ အသေအချာပဲဖြစ်ပါတယ်။
2.Pumpkin Red Lipstick
လိမ္မော်ရောင်အစားထိုး အနီ-လိမ္မော်ဖောက် နှုတ်ခမ်းနီအရောင်ကတော့ ငယ်ရွယ်နုပျိုမှုနဲ့ နူးညံသိမ်မွေ့မှုတွေကို ယူဆောင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
Nude Color နှုတ်ခမ်းနီတွေကတော့ Fashion Trend တိုင်းမှာပါဝင်ပါတယ်။ အသားအရောင်တိုင်းနဲ့လိုက်ဖတ်သလို ကျက်သရေရှိပြီး Make Up look အတော်များများနဲ့လည်း လိုက်ဖက်ပါတယ်။ အနီရဲရဲဆိုးနေကျသူတွေက အညိုရောင် နှုတ်ခမ်းနီလေးတွေပြောင်းဆိုးမယ် Nude Color ဆိုးနေကျသူတွေက အလှပြင်စားပွဲပေါ်မှာ အနီရောင်နှုတ်ခမ်းနီတွေကို ပြောင်းလဲနေရာယူလိုက်မယ်ဆိုရင် အသွင်သစ်နဲ့ လှနေတဲ့ Another Me ကို တွေ့ရမှာပါ။
အခုပြောပြခဲ့တဲ့အရောင်တွေက မြန်မာအသားအရေ မျက်နှာထား နဲ့ အင်မတန်လိုက်ဖက်ကျက်သရေရှိတဲ့အရောင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ 2019အတွက် လူငယ်ဆန်ပြီး ဆန်းသစ်တဲ့ လူကြိုက်များနေတဲ့ Color တွေကိုဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်။
ပွဲနေပွဲထိုင်နဲ့ သူများနဲ့ အတူ ကွဲထွက်စေမယ့် Lookကိုရရှိစေမှာပါ။ ခရမ်းရောင်နှုတ်ခမ်းနီဆိုးထားတဲ့သူဆိုတာ Fashion Trend ကို လိုက်မှီသူ Style ကျသူအဖြစ်ကို သတ်မှတ်ကျပါတယ်။ Daily Look အနေနဲ့ကတော့ ပန်းခရမ်းရောင်လေးတွေက သင့်လျော်ပါတယ်။
ဒါကတော့ 2017လောက်ကတည်းက တပတ်ပြန်လည်ခေတ်စားလာတဲ့ Metallic Lipstick ပါ ဒီ Make Up look နဲ့ လိုက်ဖက်မှုရှိစေဖို့ယုံကြည်မှုပဲလိုပါတယ်။
ကဲ အားလုံးအကြိုက်အများအကြိုက် သဘာဝအတိုင်းဖြစ်နေတဲ့ Korean Look, Japanese Look ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ချစ်ဖို့ကောင်းပြီးငယ်ရွယ်တဲ့ အသွင်ကိ်ုဆောင်ပါတယ်။ လူတိုင်းကြိုက်နှစ်သက်ကျပေမယ့် အသားညိုသူတွေအနေနဲ့ မလိုက်ဖက်တာကြောင့် ရဲရဲရင့်ရင့် နှုတ်ခမ်းပေါ် Color အပြည့်တင်ဖို့ပဲပြောချင်ပါတယ်နော်။